Shina CPLA Shina vita amin'ny Plastika tsy misy plastika azo aorina amin'ny baoritra 7 santimetatra vita amin'ny makiazy Gianty
CPLA Famokarana Plastika vita amin'ny plastika tsy misy rano azo havaozina azo alaina
Ny fanamboarana bioplastika dia vita amin'ny bioplastic compostable. Ny fitaovana dia antsoina hoe PLA ary vita amin'ny fambolena voaroaka. Miompy sy tsy miankina amin'ny plastika. PLA dia misy teboka mihena, izany no tsara indrindra amin'ny fampiasana mangatsiaka hatramin'ny 40 ℃. Raha ilaina ny fanoherana ny hafanana bebe kokoa toa ny amin'ny koba, na ny tavoahangy ho an'ny kafe na lasopy, dia mampiasa endrika kristaly. Tafiditra ao anatin'izany ny fametahana kapoaka ho an'ny PLA mba hanaovan-tsitrapo, ary avy eo ny hafanana haingana sy ny fampangatsiahana ny vatan'ny PLA mandritra ny famokarana. Amin'ny fampidirana kojakoja kely, ny fitaovana dia vita amin'ny hafanana hatramin'ny 85 ℃. Ny kesika ihany koa no antony feno ny atody. Ny fitaovana matanjaka antsoina hoe CPLA dia manome toky fa tsy mora mivadika mora foana ilay atody. Tena mety ho an'ny fety, catering na eny an-dalana. Ny vokatra CPLA aminay dia mbola mety amin'ny fametrahana indostrian'ny indostria, na any anaty vata fampangatsiahana na fanenoman-drivotra.
Previous: Birchwood FSC voaova voajanahary azo havaozina
Manaraka: CPLA Famokarana Plastika vita amin'ny plastika tsy misy rano azo havaozina 6,5 ​​santimetatra